नेपाल आज ओमानसँग खेल्दै | Jukson
नेपाल आज ओमानसँग खेल्दै
आइसीसी वल्ड क्रिकेट डिभिजन टूको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ । नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा १ बजे सुरु हुने खेल नामिबियामा हुनेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा आयोजक नामिबियालाई १ विकेटले हराएको नेपाल आजको खेल पनि जित्दै वल्डकप क्रिकेट छनोटको शीर्ष दुईमा रहनको लागि प्रयास गर्नेछ ।
पहिलो खेलमा हारेको ओमान पनि नेपाललाई हराउँदै जित निकाल्ने दाउमा हुनेछ । यसअघि हिजो भएका अन्य खेलमा क्यानडा र युएइ विजयी भएका थिए । नेपाल, नामिविया, केन्या, ओमान, युएइ र क्यानडासहित ६ देश सहभागी डिभिजन टु को शीर्ष २ स्थानमा रहने टोलीले जिम्वाबेमा हुने विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन ।
पहिलो खेल जितेको नेपाल अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा
इतिहासकै चिसो ओलम्पिक आजबाट सुरू हुँदै, प्योङचाङमा भव्य तयारी
७२ उच्च मावि खारेज!
‘पिंजडा व्याक अगेन’को रिलिज मिति फेरबदल
नेफ्टाको नेतृत्वमा लामाको बलियो सम्भावना
केही महिनामा नेपालमा फोरजी, के हो फोरजी ? कति फास्ट ? कति महंगो ?
यस्तो छ प्रियंका चोपडा निर्मित नेपाली भाषाको सिनेमा 'पाहुना'को ट्रेलर